WiFox, oo ah barnaamij lagu xukumo dhamaan garoonka diyaaradaha WiFis | Wararka IPhone
Mid ka mid ah waxyaabaha sida weyn noo walwal galiya marka aan u safreyno dalal kale ayaa ah suurtagalnimada ku xirnaanta qadka internetka ee loo yaqaan 'WiFi', taasina waa garoon diyaaradeed kasta inuu leeyahay. shabakadaha iyo qolalka bulshada ama meel gaar loo leeyahay halka laga samaynayo isku xidhka, laakiin had iyo jeer ma aha bilaash ama ma bixiyaan fududahay in la helo lambarka sirta ah. WiFox, dhibaatadani waxay kudhamaatay mahadcelinta iskaashiga isticmaalayaasha iyo mashruuca himilada leh ee Anil Polat.
2 Ka hadalka barnaamijka
WiFox waa mashruuc loo qaadayo iPhone-ka FoxnoMad, taas oo asal u ah wax walba. Barxadani waa xog ururin wadashaqeyn oo dadka isticmaala adduunka oo idil ay u soo diraan furayaasha shabakadaha WiFi ee dhammaan garoomada diyaaradaha, kuwaas oo uu farsameeyo Anil. Furaha sirta ah waxaan ka heli karnaa kuwa shabakadaha VIP-da, taas oo ka dhigaysa mid aad u xiiso badan in la isticmaalo marka aan helno xog ama wareegga ayaa kiciya.
Polat wuxuu xaqiijinayaa in mashruuca FoxnoMad hadda ka badan caymiska 33% adduunka oo dhan ka hadlaya garoomada diyaaradaha, waa jaantus la hagaajiyay maalin kasta mahad iskaashiga isticmaalayaasha. Sida iska cad, garoomada diyaaradaha waaweyn waxay leeyihiin shabakadaha ugu badan ee la heli karo, laakiin caymisku aad ayuu u fiicanyahay inuu noqdo, ka dib, wax wada shaqeyn ah.
Ka hadalka barnaamijka
WiFox waa barnaamij fudud, oo leh naqshad si cad oo aan macquul ahayn taas oo faahfaahinteeda aan laga taxadarin, laakiin taas oo dhinaca kale na siin doonta waqti aad u gaaban waxa aan raadineyno: helitaanka shabakad. Waxay noo soo bandhigeysaa khariidada adduunka oo leh garoomada diyaaradaha oo daboolan, halka liistada dhinaca dambe aan ka geli karno shabakadaha kala duwan, iyadoo aan awoodno inaan baari karno oo aan shaandheyno si aan u dhadhaminno. Waxaa muhiim ah in la ogaado in WiFox uu noo ogolaanayo inaan iskaashi ka sameysano barnaamijka laftiisa, waana wax ay tahay inaan wada yeelno markasta oo aan helno WiFi garoonka diyaaradaha si aan u ilaalino fikirka wadajirka ah ee ku saabsan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu hagaajiyo, laga bilaabo naqshadeynta (barnaamijka oo dhan) ilaa suurtagalnimada gelinta shabakadaha ama garoomada diyaaradaha sida ugu cadcad, laakiin maqnaanshaha beddel kale oo ka wanaagsan dabcan waxaan ku heli karnaa waxa jira. In kasta oo ay run tahay in kharashka barnaamijku uusan u dhigmin quruxdiisa, dabcan, shabakaddii ugu horreysay ee xirmay ee noo oggolaaneysa inaan isku xirno waxay horay u sameysay labada euro ee ay tahay inaan ku bixino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » WiFox, oo ah barnaamij lagu xakameeyo garoonka diyaaradaha WiFis oo dhan
Apple wuxuu bilaabay meel cusub oo uu ku dhiirrigelinayo wararka farriimaha ee iOS 10